ठूला कम्युनिस्ट देशमा सौन्दर्य प्रतियोगिता भइरहेका छन्, बेकारको बहस किन?: विरोध खतिवडा :: PahiloPost
ठूला कम्युनिस्ट देशमा सौन्दर्य प्रतियोगिता भइरहेका छन्, बेकारको बहस किन?: विरोध खतिवडा
काठमाडौं: मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ का एमाले सांसद विरोध खतिवडा तथा ३ नम्बर प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलकी छोरी श्रृङ्खला खतिवडा 'मिस नेपाल २०१८' घोषणा भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी सुरु भयो। कसैले उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिए भने कसैले उनको बाबाआमा कम्युनिस्ट भएकै कारण सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिनु गलत भने।
यसबारे मिस नेपाल श्रृङ्खलाका बुवा विरोध खतिवडा प्रश्न गर्छन्, 'छोरीको व्यक्तिगत इच्छा, विचार भन्ने कुरा हुँदैन? म खुसी छु मेरी छोरी आफ्नो क्षमताका कारण मिस नेपाल भइन्।'
छोरीले मिस नेपालमा सहभागिता जनाउने कुरा बताउने बित्तिकै आफूले अनुमति दिएको बताए। भने,'बौद्धिक क्षमताको प्रतिस्पर्धामा भाग लिए व्यक्तित्व विकास हुन्छ भन्ने लाग्यो र जाऊ भन्यौं। यसमा समस्या के छ र?'
मिस नेपाल 'ट्यालेन्ट सो' भएको र यसमा कुनै पनि किसिमको छाडापन नभएको उनको तर्क छ। कम्युनिस्ट विचारधारा राख्ने महिला तथा विद्यार्थी संघका सदस्यहरूले सौन्दर्य प्रतियोगिताको विरोध गर्ने गरेको विषयमा विरोध भन्छन्,'हो एक समय थियो सौन्दर्यको नाममा स्विमसुटसहितको प्रस्तुति हुन्थ्यो। त्यसको विरोध गरेका हौं। तर मिस नेपाल त्यो प्लेटफर्म होइन। त्यो स्टेजमा भल्ग्यारिटी देख्नु भएको छ?'
उनले कम्युनिस्ट राज्यहरूमै ठूलाठूला सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गरेकाले आजको सन्दर्भमा मिस नेपालबारेको बहस बेकारको भएको बताए।
'पहिलाको कुरा गरेर साध्य हुँदैन। समय अनुसार सोच फराकिलो नबनाए हामी कहाँ पुग्नु?' उनले सौन्दर्य प्रतियोगितालाई आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास र क्षमतालाई अभिवृद्धि गराउने अवसरको रूपमा व्याख्या गरे।
श्रृङ्खला खतिवडाका बुवा विरोध खतिवडा र आमा मुनु सिग्देल दुवैले छोरीको लागि भोट समेत अपिल गरेका थिए। 'विचार लाद्ने काम ठिक होइन। उसले आफ्नो बाटो बनाउने हो। फेरि आजकालका छोराछोरी आफैमा सक्षम छन्। प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण तयारी ऊ आफैले गरेकी हो। हामीले आवश्यक सहयोग गरौँ', खतिवडाले पहिलोपोस्टसँग भने।
श्रृङ्खला खतिवडालाई 'कमरेड' सम्बोधन गरेर बधाई दिनेहरूप्रति भने उनको आपत्ति छ। ऊ स्वतन्त्र विद्यार्थी मात्र हो। ऊ कुनै पनि पाटी निकट संघहरुमा आबद्ध छैन। ऊ अब मिस नेपाल हो।
ठूला कम्युनिस्ट देशमा सौन्दर्य प्रतियोगिता भइरहेका छन्, बेकारको बहस किन?: विरोध खतिवडा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।